अन्तरवार्ता Archives - E mechi
Mar52019 by emechiNo Comments
इमरानले भने- ‘नाेबेल पुरस्कारका लागि म याेग्य छैन, जसले कश्मीरी विवाद अन्त्य गर्न सक्छ उहीँ याेग्य हुनेछ’
एजेन्सी । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिनुपर्ने कुरा उठिरहँदा उनी आफैँले भने सो पुरस्कारका लागि आफू योग्य नरहेको बताएका छन् । हालै भारत प्रशासित काश्मिरमा भएको आतंकवादी हमलापछि भारत तथा पाकिस्तानबीच बढेको तनाव साम्य पार्नका लागि इमरानले सुझबुझपूर्ण निर्णय दिएको भन्दै उनको प्रशंसा भइरहेको छ । विशेषरी पाकिस्तानको आकाशबाट खसालिएको भारतीय वायुसेना विमानका चालकलाई नियन्त्रणमा राखेर पनि सकुशल फिर्ता गरेको घटनापछि इमरान धेरैको नजरमा परेका छन् । भारतीय पाइटल अभिनन्दन वर्तमानलाई उनको देश फिर्ता पठाएपछि इमरानलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइनुपर्ने पक्षमा अभियान चलाइएको छ । यसरी तत्कालीन घटनाकै अधारमा अभियान चलाउनेहरुले ‘इमरानले भारतसँग युद्धको सम्भावनालाई टारे, जुन क्षेत्रीय शान्तिका लागि महत्वपूर्ण कदम हो’ भन्ने तर्क अघि सारेका छन् । तर इमारानले भने
Feb282019 by emechiNo Comments
अझै यस्तो हुनेछ मौसम : एक्लै नहिँड्न, सचेत रहन मौसम पूर्वामानुमानको सूचना
अझै यस्तो हुनेछ मौसम : एक्लै नहिँड्न, सचेत रहन मौसम पूर्वामानुमानको सूचना काठमाडौ । पश्चिमी वायुको न्यून चापीय प्रभावले मौसममा भएको परिवर्तनले मुलुकभर वर्षा र हिमपात भएको छ । यसले चीसो अत्याधिक बढेको, जतिबेलापनि भारी बर्षा र हिमपात हुने भएकाले एक्लै नहिँड्न, सचेत रहन मौसम पूर्वामानुमान महाशाखाले बताएको छ । सूचना जारी गर्दै मौसम पूर्वामानुमान महाशाखाले गत रातिदेखि बदलीपछि वर्षा र हिमपात भएको र आज रातिदेखि पश्चिमबाट मौसममा क्रमिक सुधार हुँदै जानेछ । यद्यपिमध्य र पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिम पहाडी क्षेत्रमा केही दिन मौसममा सामान्य बदली रहने महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद् सुदन सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । गएको २४ घण्टामा जुम्लामा सबैभन्दा बढी ३० मिलीलिटर वर्षा भएको थियो भने काठमाडौँमा २९ मिलिलिटर वर्षा भएको विभागको तथ्याङ्क छ । काठमाडौँ उपत्यकाको वरपर आज बिहान हिमपात भएकाले यहाँ चिसो बढेको उहाँ
Feb192019 by emechiNo Comments
“यो अल्जजिरा पनि काङ्रेसकै हो “, कि कसो रमेश पौडेल ज्यु?
पशुपतिले देशमा भैरहेको यथार्थ लाई गीतमा गाउदा उक्त गीत काङ्रेसले गाउन लगायो भनेर आरोप लगाउने नेकपा कार्यकर्ता हरु अब अल्जजिराले समेत नेपालमा अधिनायकवादी तरिकामा दबाब दिएर भ्रस्टाचार बिरुद्द गाइएको गीत दबाब दिएर हटाउन लगाइयो भन्यो। अब नेकपा मित्रहरु, अल्जजिरा काङ्रेसको हो भनेर फुक्दै हिडुम , कि कसो ? ? पछिल्लो समय नेपाल तथा अन्तरास्ट्रिय स्थरमै चर्चा बटुलेका गाएक पशुपती शर्माको समर्थनमा अल्जजिराले समेत आर्टिकल लेखेको छ। उक्त आर्टिकलको हेडलाइन मै भनिएको छ , भ्रस्टाचार बिरुद्द गीत गाउदा धम्की आएपछी, नेपालमा गीत डिलेट गर्न बाध्य भए पशुपती शर्मा भनेर । गीत अपलोड गर्दा धम्की दिने र डिलेट गर्न लगाउने नेकपा कार्यकर्ताहरु, अब के अल्जजिरालाइ धम्क्याउने आट छ त? ? एउटा नेपालिले भ्रस्टाचार बिरुद्द गीत गाउदा धम्की दिने साथिहरु, अल्जजिराले समेत पशुपती समर्थनमा कलम चलायो । अब के गर्छौ?? यो त अन्त
Feb12019 by emechiNo Comments
आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर ओढारमा पुरिएकाको उद्दार गर्ने सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण बस्नेतलाई सलाम ?
काठमान्डौ , धादिङको उच्च क्षेत्रमा हिमपात भइरहेका बेलामा ओढारभित्र भेडाबाख्रासहित दुई गोठाला पुरिएको खबर आएपछि उद्दारमा जान तयारी अवस्थामा रहन हामीलाई निर्देशन आएको थियो । गत सोमबार हामी पानी परिरहेकै बेला नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट घटनास्थलतर्फ लाग्यौँ । हेलिकप्टरबाट झरेर एक घण्टा हिँडेपछि मात्रै घटनास्थलमा पुग्यौँ । सुरुमा घटनास्थल देखेपछि हामी आफै कहाँबाट उद्दार सुरु गर्ने भनेर अलमलमा पर्यौँ‍ । ओढारको मुख कहाँ हो ? पत्तो थिएन । विशाल चट्टान हाम्रा अगाडि तेर्सिएका थिए । हामीसँग ढुङ्गा फुटाउने घरेलु सामाग्री, मेशीन चलाउन बोकेरै लगिएको जेनेरेटर भन्दा अरु केही थिएन, विकट ठाउँमा अरु सामान लैजान सम्भव पनि थिएन । भग्नावशेषको प्रकृति र ठुला चट्टान देख्दा त यहाँ मान्छे होलान् र ? भन्ने शंका पनि उब्ज्यो । सामा न्यतः ओढार भन्नेबित्तिकै हामी कुलोजस्तो तेर्सो बुझ्छौ । तर गोठाला पुरिएको ओढार अलि फ
Jan232019 by emechiNo Comments
‘कालिका सिमसारलाई जिल्लाकै उत्कृष्ट बनाउनेछु’
Posted in अन्तरवार्ता, ब्यानर न्यूज
योगराज भट्टराई (योगेश) : अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार, प्रगतीशिल तथा परिवर्तन पक्षधर समूह मेचीनगर–११ र १२ मा अवस्थित कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको निर्वाचन आगामी शनिबार हुँदैछ । समूहको आगामी तीन वर्षे कार्यकालका लागि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न पटक–पटक प्रयास भए । तर, सर्वसम्मतको प्रयास विफल भएपछि उम्मेद्वारहरु दुई समूह बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । प्रगतीशिल प्यानलबाट अध्यक्ष पदका प्रत्यासी योगराज भट्टराई (योगेश) र लोकतान्त्रिक प्यानलबाट अध्यक्ष पदका प्रत्यासी ज्ञानु तामाङ (वीरबहादुर) छन् । निर्वाचनको विषयमा केन्द्रित रहेर प्रगतीशिल प्यानलबाट अध्यक्ष पदका प्रत्यासी योगराज भट्टराई (योगेश) सँग खबरमञ्च साप्ताहिकका सम्पादक प्रकाश पौडेल र विमर्श उप्रेती ले गरेको कुराकानी : अध्यक्ष पदमा तपार्ईंको उम्मेद्वारी किन ? –‘कालिका वन जनताको धन, गरौँ सबैले चौतर्फी आय आर्जन’ भन्ने नार
Aug92018 by emechiNo Comments
आदिवासी जनजाति अगुवा भन्छन् : राज्यले अझै हेपिरहेको छ
Posted in अन्तरवार्ता, राष्ट्रिय समाचार, समाचार, स्थानिय समाचार
वीरगञ्ज । संविधानमा आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार अझै सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै अगुवाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले अन्तरिम संविधानमा दिएको अधिकार पनि नयाँ संविधानमा कटौती गरिएको गुनासो गरे । २४ औं विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा वीरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति अगुवाहरुले अधिकार स्थापित गर्नका लागि अझै संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । जल, जंगल,जमिनमा अधिकार स्थापित गर्न आदिवासी जनजातिहरु एकजुट भई अघि बढ्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद, पर्साको आयोजना भएको कार्यक्रममा बोल्दै परिषदका सल्लाहकार डा दीपक शाक्यले आदिवासी जनजातिहरु जातीय रुपमा विभाजित हुँदा आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको बताए । ‘आदिवासी जनजातिलाई राज्यले अझै हेपिरहेको अवस्था छ, तर राजनीतिले गर्दा आदिवासी जनजातिहरु जातीय रुपमा विभाजित छन्’ उनले भने ‘यो जात उ